Wararka - Jawaabaha su'aalaha ku saabsan qaabka saxda ah ee qalabka
Jawaabaha su'aalaha ku saabsan qalabka saxda ah
1. Qalab noocee ah ayaad u baahan tahay si aad u isticmaasho geerida 'etching die'?
J: waxay kuxirantahay badeecada iyo sifooyinka maadiga ah. Alaabooyinka sida joogtada ah loo feero waxay isticmaali karaan mashiinka goynta tooska ah ee dhinta (oo leh shaqooyin isku dhafan), sida: cajalad dhejis laba-dhinac leh, xaashiyaha faafin, shaashad loo isticmaalo alaabada xogta elektaroonigga ah; waaxda waxsoosaarka kaliya waxay adeegsataa feeraha qalabka, feeraha hidaha, mashiinka biirka sanduuqa midabka, feerka gacanta gacanta, iwm.
2. Sidee loo qaabeeyaa caaryada qalabka iyo taxaddarrada?
Jawaab: guud ahaan iyadoo la raacayo sawirada iyo sawirada macaamilka (1: 1) si loo sameeyo aaladda qalabka. (haddii shuruudaha saxsanaantu uusan sarreeyn, shaybaarro ayaa la bixin karaa). Dhumucda iyo sifooyinka alaabada uu soo gooyey macmiilku waxay go'aamiyaan habka wax soo saar ee dhimashadu (sida: dhererka mindida, mindi hal dhinac ah, mindi sare iyo mid hoose, mindi labalaab oo mindi ah, iwm).
3. Awoodda wax soo saar iyo baaxadda caaryada qalabka?
Jawaab: caaryada qalabka waxay sameyn kartaa dhammaan noocyada sawirada aan caadiga ahayn, iyo dulqaadka badeecaddu wuxuu noqon karaa mid sax ah ilaa ± 0.03mm. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa guddiga wareegga wareegga, qalabka guryaha, taleefannada gacanta, qaybaha gawaarida, alaabada dhijitaalka ah, daabacaadda iyo warshadaha baakadaha, alaabada caagga ah, goomaha elektaroonigga ah, caruusadaha carruurtu ku ciyaaraan, isku dhejiska iyo beeraha kale. Nidaamkeena hawlgal ee 24-ka saac ee shirkadeenu wuxuu hubiyaa tayada iyo waxtarka, wuxuuna hubiyaa keenista waqtiga-ku-qaadashada ah.
4. Wareegga wax soo saarka ee caaryada qalabka?
J: haddii ay dhacdo amar deg deg ah, iyadoo loo eegayo cabirka badeecada, rarka waa la diyaarin karaa sida ugu dhakhsaha badan 4 saacadood ka dib marka la helo amarka (xaqiijinta xigashada dib ayaa loo diraa). Xaaladaha caadiga ah awgood, alaabada waa la geyn karaa maalinta xigta.
5. Suurtagalnimada xakameyn qoto dheer oo lagu garaaco aaladda dhinta?
Jawaab: aaladda dhimista qalabka baaritaanka qalabka wax lagu baaro ee qalabka wax soo saarka si loo khaldo, waayo-aragnimadu waxay go'aamisaa saamaynta alaabta. Dhererka ugu sarreeya ee dhimashadu waxay noqon kartaa 2mm. Haddii walxaha sheygu aad u adag yahay oo adag yahay, daloolka banaan ayaa la furayaa oo farqiga ayaa aad u cidhiidhsan, laguma talinayo in la isticmaalo caaryada qalabka etching, laakiin in la isticmaalo caaryada qalabka wax lagu xardho. Mashiinka waxyeelleynaya ee caaryada qalabka isugeynta lama hagaajin karo, caaryada qalabka xardhana dib ayaa loo isticmaali karaa si loogu hagaajiyo.
6. Awood wax soo saar iyo baaxad codsi oo ah caaryada qalabka wax xardha?
A. Qalabka wax lagu xardho ayaa loo isticmaali karaa in lagu shaabadeeyo walxaha qafiifka ah iyo adkeysiga boostada (sida xumbada EVA, isbuunyo, dhammaan noocyada filimka balaastigga ah, xaashida mica, qalabka dahaarka, iwm.) mindi hal dhinac ah iyo 0.6 mm godka banaan. Middi sare iyo mid hoose, mindi hal dhinac ah, dherer mindi oo kala duwan (sida wax 8mm ah) waxay noqon kartaa 5mm ama ka badan. Faa'iidada ugu weyn ayaa ah in waqtiyada shaabbaduhu ay sarreeyaan oo daabku si wareegsan loogu hagaajin karo.
Qashinka-Daadinta Soo-saarista Rotary Die, Birta xardho steel, Auto-Waxyaabaha Buuxinta xardho dhinto, Muraayadda Dusha sare ee Muraayadda oo Dhinta, Laser dhinta, Maaskarada Rotary Die,